Buyaas News - Anabolics Steroids mpamokatra
Inona no atao hoe Anavar (Oxandrolone)? Oxandrolone (53-39-4), amidy eo ambanin'ny anarana marika Oxandrin sy Anavar, ankoatra ny hafa, dia fanafody androgen sy anabolic (AAS) izay ampiasaina mba hampiroboroboana ny fahavoazana amin'ny toe-javatra isan-karazany, mba hanampiana ny fanasitranana proteinina vokatry ny ny fitsaboana kortika ho an'ny marary, ho fanohanana ny fialana amin'ny lelafo mivaingana, mba hitondrana fanaintainana amin'ny taolam-paty miaraka amin'ny osteoporose, hanampy amin'ny fandrosoana ...
Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate (iza no mahazo?)
Novambra 17, 2018
Inona no atao hoe tranbolone enanthate? Ary ahoana ny fomba fiasany? Trenbolone enanthate (10161-35-8) sy Trenbolone acetate (10161-34-9) dia roa amin'ny anabolic steroids anabolic most commonly used. Ny tranolnana ezanthate vs Trenbolone Acetate dia saika mitovy. Ny fahasamihafana dia tonga amin'ny fotoana andehanan'ny tsirairay hanaisotra ny fototra Trenbolone mavitrika. Na dia mitovitovy mitovy aza izy ireo, ny Trenbolone Enanthate sy ...
Masteron Propionate na Masterant Enanthate? Iza no tsara ho anao?
Inona no atao hoe Masteron Propionate (Proposta Drostanolone)? Masteron Propionate (521-12-0) sy Masteron Enanthate (472-61-1) dia variana amin'ny Masteron misy fahasamihafana kely. Samy andrandraina izy ireo ary samy mahazatra eo amin'ny bodybuilders. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny roa dia ny fitantanana dosage sy ny antsasaky ny fiainany. Masteron Propionate dosage dia kely kokoa fa omena isan'andro satria efa mihetsika haingana ny zava-mahadomelina ary manadio ny th ...